Nkwa Chineke Kwere na Ọ Ga-eme Ka Ụwa Ghọọ Paradaịs Mere Ka Ndụ M Gbanwee | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Aymara Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Mizo Mongolian Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Akụkọ Ivars Vigulis kọrọ
ABỤ M ONYE: LATVIA
NDỤ M BIRI: ANA M AGBABU ỌGBA TUM TUM ỌNWỤ ỌNWỤ
A mụrụ m n’obodo Riga, nke bụ́ isi obodo Latvia. Ọ bụ mama m zụrụ mụ na nwanne m nwaanyị. Mama m bụ onye Katọlik. Ma, naanị mgbe anyị na-aga chọọchị bụ ma e mewe ememme n’ụlọ ụka. Kemgbe ụwa m, ama m na e nwere onye ka mmadụ niile ike. Ma, mgbe m na-eto okorobịa, e nwere ihe ndị ọzọ ka m mkpa.
Mgbe m ka bụ nwata, mama m chọpụtara na enwere m anya nkà. Ọ na-abụ m hụ ihe dị ka redio, mụ atụsasịa ya. E mechaa, mụ edoziekwa ya. Obi anaghị ekwe mama m ịhapụ naanị m n’ụlọ n’ihi na ọ ma na e nwere ọtụtụ ihe m nwere ike ịtụsasị. Ihe o meziri bụ ịzụtara m ihe e ji akụziri ụmụaka ihe nke e ji ígwè rụọ. Ọ na-atọ m ụtọ iji ya rụọ ihe a chọrọ ka e jiri ya rụọ, e mechaakwa, mụ atụsasịa ya. Ihe ọzọ masịkwara m n’oge ahụ bụ ịgba ọgba tum tum. Mama m denyere aha m n’ebe a na-amụ otú e si agba ọgba tum tum. M malitere iji obere ọgba tum tum asọ mpi. Emechakwara m gbawa nnukwu ọgba tum tum.
Ebe ọ bụ na m na-amụtakarị ihe ngwa ngwa, amụtara m ịgba ọgba tum tum ahụ nke ọma n’agbanyeghị na ụdị egwuregwu a nwere ike igbu mmadụ ma ọ bụ merụọ ya ahụ́. N’asọ­mpi ndị ọgba tum tum nwere na Latvia, m meriri ugboro atọ. M merikwara ugboro abụọ n’oge ndị ọgba tum tum si mba Lituenia, Estonia, na Latvia sọrọ mpi.
N’oge ahụ m na-agba ọgba tum tum, enyi m nwaanyị m mechara lụọ na Ndịàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl. Aha enyi m nwaanyị ahụ bụ Evija. Otú ya na Ndịàmà Jehova si malite ịmụ Baịbụl bụ na ọ gụrụ akwụkwọ ha ma zigara ha ozi ka ha bịa mụwara ya Baịbụl. N’oge na-adịghị anya, Ndịàmà Jehova abụọ bịara, ha na ya ebido ịmụ Baịbụl. Enweghị m nsogbu na ọ na-amụ Baịbụl. Ma n’oge ahụ, enwechaghị m mmasị n’ihe gbasara okpukpe.
Ndịàmà Jehova ahụ mechara gwa m ka m bịa soro ha mgbe ha na Evija na-amụ Baịbụl. Ekwetara m, ihe ha kwuru tọkwara m ụtọ. Ihe kacha metụ m n’obi bụ nkwa Chineke kwere na Baịbụl na ọ ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs. Dị ka ihe atụ, ha gosiri m ihe e dere n’Abụ Ọma 37:10, 11. Ebe ahụ kwuru, sị: “N’oge na-adịghị anya, onye ajọ omume agakwaghị anọ; ị ga-elekwa anya n’ebe ọ na-anọ, ma ọ gaghị anọ ya. Ma ndị dị umeala n’obi ga-enweta ụwa, ha ga-enwekwa obi ụtọ dị ukwuu n’ihi udo nke zuru ebe niile.” Nkwa ahụ metụrụ m n’obi.
M mụkwuru gbasara Chineke, mụ achọpụta na ọtụtụ ihe ndị chọọchị na-akụzi abụghị eziokwu. Ihe ndị m na-amụta na Baịbụl mere m obi ụtọ n’ihi na ihe Baịbụl na-ekwu doro m anya, bụrụkwa eziokwu.
Baịbụl ahụ m na-amụ mere ka m ghọta na Jehova ejighị ndụ egwu egwu. (Abụ Ọma 36:9) Ihe a m mụtara mere ka m chebara ọgba tum tum m ­na-agba echiche. Achọghịzi m iji ndụ m egwuri egwu. ­Achọrọ m iji ya na-enye Jehova otuto. Aha m a na-anụ ebe niile na otú ndị mmadụ si eto m na obi ụtọ m na-enweta ma m gbawa ọgba tum tum abụghịzi mkpa m.
Ihe m mụtara na Baịbụl mere ka m ghọta na ọ bụ Jehova nyere m ndụ nakwa na m kwesịrị iji ndụ m mee ihe dị ya mm
N’afọ 1996, agara m mgbakọ Ndịàmà Jehova e mere n’obodo Talin, nke dị n’Estonia. Ndị si mba dị iche iche bịara ya. Ebe anyị nọ mee mgbakọ ahụ dị nso n’ámá egwuregwu m nọrọla ọtụtụ ugboro gbaa ọgba tum tum. Ná mgbakọ ahụ, ahụrụ m ka ndị si mba dị iche iche nọkọrọ ọnụ n’enweghị onye ya na ibe ya nwere nsogbu. Dị ka ihe atụ, mgbe akpa otu Onyeàmà Jehova funahụrụ ya, ekwuru m n’obi m na o nweghị ihe ga-eme ka ọ hụ ya ọzọ. Ma n’oge na-adịghị anya, Onyeàmà Jehova ọzọ hụrụ akpa ahụ ma wetara ya onye nwe ya, o nweghịkwa ihe furu n’ime ya. Ihe ahụ juru m nnọọ anya. Ma, o mere ka m ghọta na Ndịàmà Jehova na-eme ihe ha na-amụta na Baịbụl. Mụ na Evija mụsiwere Baịbụl ike, anyị ghọkwara Ndịàmà Jehova n’oge e mere anyị baptizim n’afọ 1997.
Ụfọdụ ndị enyi m mụ na ha na-agbabu ọgba tum tum anwụọla n’ihi otú ha si agba ya ọnwụ ọnwụ. Ihe m mụtara na Baịbụl mere ka m ghọta na ọ bụ Jehova nyere m ndụ nakwa na m kwesịrị iji ndụ m mee ihe dị ya mma. O nwere ike ịbụ ihe a m mụtara mere m ji ka dịrị ndụ.
Mụ na nwunye m rụrụ ọrụ afọ anọ n’ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị na Riga. Ma ugbu a, anyị amụọla nwa nwaanyị. Aha ya bụ Alise. Obi dịkwa anyị ụtọ na anyị na-enyere ya aka ka ọ hụ Jehova n’anya. Otu ugboro n’izu, ana m aga arụ ọrụ n’ebe Ndịàmà Jehova na-asụgharị akwụkwọ ha e ji amụ Baịbụl. M na-aga arụziri ha ụgbọala na ihe ndị ọzọ n’ebe ahụ. Obi dị m ụtọ na m ka ji ihe m mụtara n’oge m bụ nwata na-eme ihe bara uru. N’eziokwu, m ka na-atụsasị ihe dị iche iche ma na-edozi ha.
Obi dị m ụtọ na m mụtara ihe Baịbụl na-akụzi. O meela ka mụ na nwunye m na nwa m na-akụziri ndị mmadụ banyere ezi Chineke. N’eziokwu, nkwa Chineke kwere na ọ ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs mere ka ndụ m gbanwee.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Nkwa Chineke Kwere na Ọ Ga-eme Ka Ụwa Ghọọ Paradaịs Mere Ka Ndụ M Gbanwee
NDỊ NA-AGỤ AKWỤKWỌ ANYỊ NA-AJỤ, SỊ Gịnị Mere Chineke Ji Kwe Ka Ndị Mmadụ Na-emegbu Ndị Ọ Na-enweghị Ka Ọ Hà Ha?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Agha nke Ghasasịrị Ụwa
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Agha nke Ghasasịrị Ụwa
ỤLỌ NCHE Agha nke Ghasasịrị Ụwa